Qasaaraha Qaraxyadii Beydhabo oo sii kordhay iyo Madaxda dalka oo ka hadashay – XOGMAAL.COM
Qasaaraha Qaraxyadii Beydhabo oo sii kordhay iyo Madaxda dalka oo ka hadashay
Galinkii dambe ee shalay waxaa Baydhabo ka dhacay labado qarax oo ahaa kuwo ay isku soo xireen labo qof oo la rumeysan yahay in ay ka tirsan yihiin Al shabaab.
Tirade dadka ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada baydhabo ayaa lagusoo waramayaa in ay sii korortay, Inta la xaqiijiyay dadka ku dhintay qaraxyada waa 22 qof halka dhaawaca uu ka badan yahay 36 qof sida uu xaqiijiyay Cali Wardheere Dooyow Guddomiyaha Bobolka Baay.
Wararka qaar ayaa tirade dhaawaca gaarsiinaya ilaa 50 ruux.
Dhinaca kale Shariif Xasan Sheekh Aadan Madaxweynaha K/galbeed Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeye labadii qarax ee ka dhacay baydhabo.
Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku shahiiday weerarkan arxan darrada ah ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay garab istaagaan qoysaska dadka ay dhibaateeyeen argagaxisada Alshabaab
Madaxweynaha ayaa faray Xukuumadda inay si deg deg ah gargaar caafimaad u gaarsiiso dhaawacyada culus ee sida bahalnimada leh Alshabaab ay qaraxyo kula beeegsadeen Baydhabo.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha shacabka Soomaaliya oo la hadlay Idaacadda Kulmiye ayaa cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay Goob ay isugu yimaadaan oo ku yaala Magaaladda Baydhabo ee Gobolka Baay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in Isbitaaladda Magaaladda Baydhabo ay u diri doonaan gargaar Caafimaad si wax loogu qabto dadka falkaasi ku waxyeeloobay.